Abathandi esiqhingini iholide ngokuvamile khetha ukuvakashela iziqhingi ngesiGreki, futhi phakathi kwabo ungumholi wangempela saseKrethe. Yena izivakashi hhayi kuphela ithuba etotoswa elangeni eningizimu ku ogwini romantic kakhulu wezilwandle, kuyilapho ukuyohlala amahhotela ethokomele emkhayeni, njengokugula Aparthotel Sofia Mythos Beach 3 * (Greece / o. Crete / Rethymnon), kodwa futhi Amazing zokungcebeleka zomlando eziningi ukuba sibone ukuthi sesingené dream namanje esikoleni.
Lesi siqhingi okuyimfihlakalo Minotaur
Crete - esikhulu kunazo zonke iziqhingi okuqondene Greece. Kusukela ezinganekwaneni zasendulo, siyazi ukuthi lokhu isiqephu sezwe, ezungezwe nxazonke ngasemanzini aluhlaza eMedithera, kubhekwa lapho kwazalelwa khona unkulunkulu ophakeme ngokunqoba kwamaGreki asendulo - Zeus. Le ndawo yasezulwini futhi lapho kwazalelwa khona Minoan impucuko. Kuze kube manje, kulesi siqhingi ngaphansi yokwemba, abavubukuli bathola zobuciko ezibalulekile ngemva ucwaningo olunzulu zidluliselwa ku-Museum.
Crete - iyipharadesi kubathandi of hambo. Naphezu kweqiniso lokuthi sonke lesi sifunda ubhekwa ebizayo., ongaphakeme ongakhetha izindleko ingatholakala uma uthanda. Isibonelo, uma uhlala ezintathu-star hotel umndeni lesibili lolwandle umugqa, ezifana Aparthotel Sofia Mythos Beach 3 *, ungagcina cool, sidla ukudla kwasekuseni obubanjelwe cishe wonke amahhotela kulesi sigaba zifakwe segumbi. Ngaphezu kwalokho, Aparthotel ngokuvamile in the amakamelo anemisila ikhishi, futhi uma kudingekile, ungakwazi ukupheka yena.
By the way, cishe yonke emabhishi kamasipala lingasempumalanga yalesi siqhingi, ngakho izivakashi Ungashintsha ebhishi, mahhala, futhi ujabulele ukubukwa ulwandle ngezindlela ezihlukahlukene. Lesi siqhingi sethiwa wageza ngasemanzini ezintathu kwezilwandle: i-Ionian, Aegean futhi waseLibya. Beaches kumasayithi ezahlukene kungaba itshana, isihlabathi noma oxubile. Ngezinye izikhathi umnyango kolwandle kunzima rocks kwamanzi, namabhishi abaningi babe pontoons. Kodwa amanzi kuyafana yonke indawo kuyinto ehlanzekile, ukuze ungakwazi ukubona ngezansi.
Isimo sezulu eKrethe
Lesi siqhingi iyona eningizimu kakhulu kuleli qoqo leziqhingi ngesiGreki, ngakho kukhona isizini ukubhukuda ukuthatha isikhathi eside kunokuba e kuyizwe laseGreece, futhi eziqhingini eziningi. Isimo sezulu nakwezifudumele ejwayelekile, elikhulu umswakama okuqukethwe mayelana 50 amaphesenti. Lena esiqhingini libalele kakhulu, lapho izinsuku abangaphezu kwamakhulu amathathu libalele ngonyaka. Impela yilo Inzuzo main saseKrethe phezu ziqhingi, zitholakala esishintshashintshayo ezishisayo bhé, futhi lapho ngezinyanga zasehlobo lungumxokozeli yemvula. Futhi ezinyangeni zasehlobo kuwufanele ngempela ashisayo, kodwa Meyi futhi Septhemba ezithambile nomusa ngokwengeziwe. Ngaphezu kwalokho, ekuqaleni kanye ekupheleni kwesizini izindleko yokuhlala e amahhotela ephansi kakhulu kunalokho phakathi, futhi uma ukuphila ehhotela umndeni-run nesizotha, kodwa inobungane, isibonelo, Sofia Mythos Beach 3 * (Crete), khona-ke ukuphumula futhi kungenziwa ngokuthi ukonga.
Uma uthenge izinkambo Bali, hhayi isiqhingi esise-Indian Ocean, kanye ogwini ethekwini eponymous eKrethe ke ukubheja Okungcono ongakwenza ukuthenga ithikithi e sezindiza eyinhloko kulesi siqhingi, esemgwaqweni Heraklion. Lapha e eMoscow nakwamanye amadolobha amakhulu Russian ithunyelwa kokubili ezindizeni avamile futhi maphepha. Ngaphezu kwalokho, ungaya kuqala enhlokodolobha Greek, Athens, bese iphinde itshalwe isikebhe ngomkhumbi ziye eKrethe. Bobabili ongakhetha zingokoqobo kakhulu, kodwa izinkambo ejwayelekile Bali, ukunikela kakhulu opharetha ukuvakasha zihlanganisa imali ukuze Nikos Kazandzaki Isikhumulo sezindiza (Heraklion). Ayevame zihlanganisa ukudlulisela kusuka capital resort oyifunayo, kulesi simo, Bali, lapho itholakala ngenhla okuthiwa Sofia Mythos Beach 3 * Ihhotela.
Crete liyisikhungo ezokuvakasha eGreece, lapho evuthiwe ingqalasizinda izivakashi, kodwa esiqhingini ungathola amadolobha eziningi ezimangalisayo, lapho impucuko oye wathinta kancane kuphela ngaphandle kokuphula charm acwebile futhi zemvelo. Ngakho kuyinto edolobhaneni Bali. Kuyinto okudotshwa encane, esemgwaqweni 45 ukusuka Heraklion. Lapha zitholakala amahhotela eziningana ethokomele. Kuyinto ngokuyisisekelo "Trika", njengoba Aparthotel Sofia Mythos Beach 3 *. Slope kusukela hotel ulwandle ngempela emaweni. Kodwa Ihhotela inikeza imibono ulwandle okumangalisa ngempela okuyinto kungajatshulelwa usuku lonke.
Sofia Mythos Beach 3 * (Greece / Bali / Crete): incazelo jikelele kanye nendawo
Leli hhotela siqukethe izakhiwo ezimbili: "Sofia" futhi "mythos". Isikhathi sokugcina isakhiwo kwalungisa ngo-2006. Eyokuqala itholakala phezu kwegquma eliphakeme ngamamitha 100 kusuka osebeni, kodwa yesibili - kwesokudla endaweni lolwandle. Eceleni kwabo kuyinto echwebeni futhi semikhumbi siyaphithizela, futhi kusihlwa, izivakashi zijabulela izibani ukunamathela imikhumbi bay ekuseni - phezulu phezu komkhathi azure ka oseyili ezimhlophe of yezikebhe. Ukuzijabulisa wokuhambela amagatsha, okwakuhlanganisa ababaningi ngakho, ihhotela futhi kwamamitha angu-200, kodwa lo sebhasi - mayelana angu-2. Yingakho isixazululo esingcono kakhulu izivakashi ezifike lapha ukuvela okuningi kusukela ngokuvakashela eziningi ezikhangayo, kuyinto imoto eqashiwe. Ukuze wenze lokhu, kudingeka aphathe izincwadi zokushayela of standard international.
Aparthotel Sofia Mythos Beach 3 * inikeza izivakashi kanye 70 amakamelo ukhululekile kulungisile lwezigaba ezahlukene: amafulethi olulodwa nomndeni. Zonke amakamelo anemisila ikhishi elincane nge efrijini, kuvulandi noma ithala, lokugezela elineshawa, hairdryer nokunye. D. Ukuze sikukhokhise inhlawulo, izivakashi zinikezwa TV air conditioning. Khokha futhi ephephile womuntu eziyigugu nemali, kanye minibar. Amakamelo futhi ube ucingo, umsakazo, i-TV satellite, nokunye. D. Ukugada kanye ngesonto, kodwa yelineni ithawula ushintsho senzeka Njalo ngemva kosuku olulodwa.
Ezahlukene okumnandi yemifino kanye nenyama izitsha, okunezinhlobonhlobo elikhulu ushizi ayi - zonke lezi ocebile eGreece libalele. Sofia Mythos Beach 3 * usebenza ngaphansi "isigamu-ibhodi". Lokhu kusho ukuthi izivakashi zijabulela ibhulakufesi kanye dinner. Ngokusho Izibuyekezo zezivakashi, kuba ukudla okumnandi kakhulu. Ekuseni, siyohlale iphalishi izingane, okuyinto ekahle kakhulu imindeni nezingane. Ngesikhathi lezitsha ungathola ezihlukahlukene ukudla okulula, ikakhulukazi ushizi kanye nemikhiqizo yobisi, izithelo kanye nemifino. Imenyu siqukethe izitsha yendabuko LwaseMedithera cuisine European. Njalo ibhulakufesi kuyinto namakhekhe fresh. Isidlo sasemini kungenziwa yayala ngemali eyengeziwe kule yokudlela "a la Carte", esemgwaqweni ku evulanda esibheke isikhala ulwandle. Noma kunjalo, iningi izivakashi Zikhetha ukuklaba kulo mzana noma hambo wendawo.
Aparthotel Sofia Mythos Beach 3 * unikeza ongaphandle indawo yokubhukuda. Kubalandeli of ezemidlalo nokuzijabulisa kukhona itafula kwechibi ping-pong. Ezinganeni kukhona ebaleni lokudlala. Uhlelo Animation ehhotela lapho, kodwa kusihlwa ngomculo bukhoma. Abathandi umdanso ungakwazi ukujabulela indaba ephathwayo nobusuku obungamashumi amane, eqhutshwa emzaneni. Kulabo abafisa ukuqasha imoto, kukhona iphuzu Car Rental futhi yokupaka. Izivakashi ehhotela kukhona inkonzo yezokwelapha, ilondolo nokuthunyelwa kwezingubo elondolo, exchange, ukuvakasha edeskini, nokunye. D.
Ngo ethekwini Bali has amabhishi ezine sandy, okuyinto zitholakala amatheku encane. Ngowokuqala ngqa kusukela onguthelawayeka - imimoya ivulekile kakhulu futhi evulekile lapha amagagasi ngempela eqinile futhi Surfers vakashela leli bhishi ethile. Leli chweba yesibili ezolile kakhulu, kodwa yesithathu, lapho ebhishi ungaphakathi eduze ngokushesha Ihhotela Sofia Mythos Beach, noma kunalokho, lapho icala "mythos" - olusebenza kakhulu. Yingakho ehhotela izivakashi ngezinye izikhathi uncamela uphumule bay wesibili noma lesine, eduze ehhotela "Evita."
Nokho enkonzweni ekuseni ithunyelwa ebhishi eliseduze. Lapha, izivakashi - sun bed nezambulela (kwendibilishi), i-volleyball yasolwandle (mahhala), izifundo diving, ezinezinjini kanye nezemidlalo non-esinenjini (kwendibilishi), njll ...
Kungakhathaliseki ukuthi ingxenye yesiqhingi kuyinto ihhotela, izivakashi eziningi zama ukubavakashela ezikhangayo amaningi ngangokunokwenzeka. Phela, eKrethe - weqiniso ezivulekile Museum. abahambi ongumpetha uthi: Yilowo nalowo kulesi siqhingi, kubalulekile ukwenza okudingekayo 6 izinto:
Vakashela ethekwini Balos zibabaza "kiss wezilwandle ezintathu". Lapha kulapho nezilwandle ezintathu oxhumene ukugeza ogwini esiqhingini we Minotaur.
Iya ebhishi "Vai" futhi ube phakathi hippie yangempela.
Vakashela Santorini edolobheni.
Zama ukuxazulula imfihlakalo uxhaxha le Minotaur sika.
Ukuze uthole ukuthi isihloko ngesiGreki umdanso Sirtaki kusihlwa, futhi ogwini.
Ukufunda ukuntweza dive futhi hlola ekujuleni kolwandle.
Kwamanye izinkambo lingabhukwa edeskini hambo, kodwa kuyisimo esifanayo kungenziwa emzaneni, futhi kube nezindleko eziphansi. Izivakashi eziningi ukwenza kanjalo. Kodwa labo kuzivakashi muntu phakathi nokuvakasha kwazo esiqhingini ukuqasha imoto, ukuya ezikhangayo ngaphandle umhlahlandlela, kodwa ngaso sonke isikhathi angajoyina iqembu elilodwa noma kwenye.
Ihhotela Sofia le Mythos Beach ke 3 * (Crete) libuyekeza holidaymakers
Uma ubheka amazwana izinsiza ulwazi, okumelelwe leli hhotela, uzophawula into engajwayelekile: Izibuyekezo eziningi ngokuyisisekelo kuqhathaniswa. Umuntu ekubonga bakhe ngenxa ngemisebenzi emihle nabanikazi friendly futhi ubhoko ehhotela, abanye, kunalokho, ukunikeza izibonelo izigameko ezehlukene ezingemnandi phakathi kwabo kanye nabasebenzi ehhotela Sofia Mythos Beach 3 *. Izibuyekezo kwezinye izivakashi ekhishini futhi yokudlela iminikelo, e okunye ukuhlolwa akhononde staleness imikhiqizo kanye kwendle. Nge ukuthi ixhunyiwe? Impendulo, ngiyacabanga, ulula. Ezinye izivakashi Russian, befuna ukuba ilondoloze imali yokuthenga izindlu, ungakhethi ehhotela amane noma aphambili, futhi isabelomali abavamile iningi ezintathu, bese, kanye-ke, bayakhohlwa izisusa zabo futhi uqale ukuba zitshele inkonzo Deluxe. Nokho, lokhu kumane nje akunakwenzeka. Izifiki, isibonelo, akasoze kufunwe kusuka ezintathu-star izimo ehhotela, okuyizinto kuphela emahhotela kanokusho. It kubalulekile ayicabangele lapho ekhetha uhambo. Uma une induduzo kubaluleke kakhulu, kufanele ibhaxa futhi ithikithi ehhotela ekilasini ephakeme.
Ngo Izibuyekezo kwabo lezihambi bhala ukuthi amakamelo bahlanza kuleli viki esisodwa. Nokho, kuyinto ejwayelekile, yena ehhotela ezintathu-star. Kuyefana nasendleleni udaba okunomsoco. Ikhishi, 3-ihhotela lezinkanyezi anganikeza izivakashi nge itafula uhla enkulu, kodwa leli hhotela ukuntuleka okukhona owake wabona, futhi ukhuluma ngani ke wokubuyekezwa okuvumelekile.